Guddoomiyaha KULMIYE iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo Lagu soo Dhaweeyey Degmada Laaso-dacawo+Sawiro |
Guddoomiyaha KULMIYE iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo Lagu soo Dhaweeyey Degmada Laaso-dacawo+Sawiro
Hargeisa(GNN):-Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna murrashaxa madaweyne ee xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi iyo wefti ballaadhan oo uu hoggaaminayo, ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyey degmada Laaso-dacawo ee gobolka Saaxil iyo deegaanno hoos yimaadda.
Guddoomiyaha iyo weftigiisa oo ka kooban saraakiil xisbiga katirsan, wasiirro, xildhibaanno, siyaasiyiin, salaadiin, cuqaal, haween iyo xubno kamid ah garabka dhallinyarada xisbiga oo hawlo shaqo ku jira, ayaa maanta waxa si weyn usoo dhaweeyey dadweynaha ku dhaqan deegaanno ay kamid yihiin Taagga, Bureeqa iyo laaso-dacawo iyada oo dadweynaha ku dhaqan deegaannadaasina caleemo qoyan iyo astaanta xisbiga KULMIYE kusoo dhaweeyeen weftiga.
Hormoodka magaalooyinka Taagga iyo Bureeqa oo katirsan degmada Laasa-dacawo, ayaa hadallo ay kaga warbixinayeen xaaladda deeegaanadaas u jeediyey guddoomiyaha iyo weftigiisa, waxana ay shaaca ka qaadeen in shacabka deegaannadani si buuxda u taageersan yihiin xisbiga KULMIYE iyo murrashax Muuse Biixi Cabdi.
Guddoomiyaha iyo weftigiisu waxa ay soo indho indheeyeen baaro masno ah oo lagu beeray noocyada kala duwan ee khudaartu, kuwaas oo ay dadweynaha deegaanku tacab badan geliyeen, waxana uu indhihiisa kusoo arkay khudaar badan oo beerahaas kasoo go’day oo diyaar u ah inay intifaacsadaan dhammaanba dadweynaha reer Somaliland.
Weftiga guddoomiyaha, ayaa loo gelbiyey dhinaca magaalada Laasa-dacawo oo ay kusoo dhaweeyeen mawjado dadweyne ah oo halkaas diyaar ugu ahaa soo dhaweynta weftiga, iyada oo markii dambena goob fagaare ah lagala hadlay dadweynihii halkaas isugu yimi oo dhammaantood ka sinnaa taageerada guddoomiye Muuse Biixi Cabdi.
Salaadiin, cuqaal, haween iyo xubno kale oo halkaas ka hadlay, ayaa shaaca ka qaaday in dadweynaha degmada Laasa-dacawo iyo deegaannada hoos yimaaddaaba si buuxda u taageersan yihiin guddoomiye Muuse Biixi Cabdi, isla markaana codkooda u huri doonaan waqtiga la gaadho maalinta doorashada madaxtinimada.
Siyaasiyiin ay kamid yihiin Ambassador Xuseen Cali Ducaale (Cawil), Cali Maxamed Warancadde, Cali Maxamed Yuusuf (Cali-gurey), Jamaal Cali Xuseen iyo Cabdicasiis Maxamed Samaale oo halkaas ka hadlay, ayaa shacabka degmada Laasa-dacawo uga mahadceliyey sida milgaha iyo maamuuska leh ee ay usoo dhaweeyeen guddoomiyaha iyo weftigiisa, waxana ay ku dhiirrigeliyeen inay codkooda la ogaadaan guddoomiye Muuse Biixi Cabdi xilliga codaynta.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo ugu dambayn dadweynaha reer Laasa-dacawo hadal u jeediyey, ayaa u mahadnaqay, waxana uu ku ammaanay dedaalka dhinaca beeraha ee ay ku tallaabsadeen.
Ugu dambayntii guddoomiyaha iyo weftigiisu waxa ay dadweynaha degmada Laasa-dacawo la qaateen hadhimo-sharafeed si maamuus sare leh loo agaasimay, waxana hadhimada dusheeda lagu wadaagay kaftan iyo is xogwaraysi dhexmaray xubnihii madasha ku sugnaa.